प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि भाडामा लिएको प्रहरीको गाडी दुर्घटना, १० घाइते
२५ श्रावण २०७७, आइतवार | Aug 09, 2020 | 17:44:09
By radiojanakpur on	 June 28, 2017 प्रमुख समाचार
कैलाली, असार १४ – प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि भाडामा लिएको प्रहरीको गाडी दुर्घटना हुँदा १० जना घाइते भएका छन् । कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक बलबहादुर बुढा मगरको नेतृत्वमा गएको १५ जना सवार प्रहरीको मिनिट्रक सहजपुरको उकालो भीरमा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा १० जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ । गम्भीर घाइते हुनेमा एक जना म्यादी प्रहरी र तीन जना प्रहरी जवान हुन ।
कसरी दुर्घटना भयो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार बिहानै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा मतदान गरेर धनगढी हँुदै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि कैलालीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिहान ७ बजे प्रहरी नायव उपरीक्षक बलबहादुर बुढामगरको नेतृत्वमा १५ जनाको टोलीलाई डोटीको बुढवलसम्म पठाएको थियो । तर गाडी बुढवल नपुग्दै कैलालीको सहजपुरमै दुर्घटना भयो ।
धनगढीबाट अत्तरिया हुँदै डोटीतिर लागेको प्रहरीको गाडी चुरे गाउँपालिकाको गढीभीर पार गर्ने क्रममा थियो । भाडामा लिएको गाडीका चालक मानसिंह चौधरी थिए । चालक चौधरी तराईको समथर ठाउँमा राम्रै गाडी हुइक्याउन सक्थे । तर पहाडका उकाली भीरमा उनलाई गाडी चलाएको अनुभव थिएन ।
छेउमा प्रहरी नायव उपरीक्षक बुढामगर बसेपछि चालक चौधरी अलिकति हतोत्साही थिए । साघुरो सडक र बढी घुमाउरो हुने भएकाले प्रहरी नायव उपरीक्षक चौधरीले अलिकति होशियार भएर गाडी चलाउन नभनेका होइनन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिएर सकुशल धनगढी पुर्‍याउने जिम्मा बोकेका चौधरी उकालो भीर र घुमाउरो सडक देखेरै आँखा तिरीमिरी गर्न थाले ।
चालकसँगै बसेका प्रहरी नायव उपरीक्षक र पछाडी १४ जना थिए । सबैजना आफ्नै धुनमा थिए । अचानक गाडी चिप्लियो । तीब्र गतिको गाडी चिप्लिएपछि केही अगाडी पुगेर पल्टियो पनि । गाडीको पछाडी बसेका १० जना प्रहरी घाइते भए ।
धन्य ! गाडी भीरबाट खस्न पाएन
गाडी चिप्लिए पनि सडकको भीरतिर पल्टियो । भीरतिर नभई सडकबाट तलतिर पल्टिएको भए ठूलो दुर्घटना हुने प्रहरी नायव उपरीक्षक बुढामगरले बताउनुभयो ।
‘धन्य बाचियो’ प्रहरी नायव उपरीक्षक बुढामगरले भन्नुभयो ‘गाडी भीरतिर पल्टिएर खासै ठूलो क्षति भएन । यदि भीरबाट तलतिर खसेको भए नसोचेको क्षति हुने थियो ।’
घाइते १० जनामध्ये ६ जना सामान्य घाइते भएका छन् । ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ । गम्भीर घाइते हुनेमा प्रहरी जवान कालुसिंह खड्का, टेकबहादुर बोहरा र बलराम कठायत छन् । यस्तै म्यादी प्रहरी बुद्धि हमाल पनि गम्भीर घाइते भएका छन् ।
उनीहरु चारै जनाको पद्मा अस्पताल अत्तरियामा उपचार भइरहेको छ । घाइते प्रहरी जवान कालुसिंहको आँखा र दाया हातमा चोट लागेको छ । म्यादी प्रहरी हमालको खुट्टामा चोट लागेको छ ।